(၁၉) နှစ် - HOCD ပျောက်ကွယ်နေပြီ - သင့် ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုရှိသည်
ကျွန်မပထမဦးဆုံး 12-13 (13 မှာကျမရဲ့အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရ) ဝန်းကျင်အပျိုဖော်ဝင်စရဲ့ start မှာညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်တော့တာပဲ။ ငါ vanilla porn နှင့်အတူချွတ်စတင်စသည်တို့ကိုလိင် blowjobs ပင်ဓာတ်ပုံများကို
ထိုအခါကိုယ့်ပြီးတော့လိင်တူချင်း porn မှအပေါ်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ရာ POV စအို porn ကိုကြည့်စတင်!
ငါသိသာအမျိုးသမီးတွေခဲ့သောငါ၏သဘာဝကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းကျော် ယူ. ဈလိင်တူချစ်သူခဲ့ obsessing ထဲသို့အကြှနျုပျကိုခြယ်လှယ်။ porn ကနေဝေးနေပါ ကျေးဇူးပြု. !!!
ငါစိတ်ဓာတ်ကျမှန်ကန်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရ (ဈအစစ်အမှန်ယုံကြည်မှုနှင့်အထွက်ခဲ့သည်။ ) ထို့နောက် 17-18 န်းကျင်ကိုယ့် nofap တွေ့ရှိခဲ့ဒီမှာကိုယ့်နေဆဲ relapses ၏ဝန်နှင့်အတူသွားယနေ့ဖြစ်ကြောင်းကို! ကျနော်ကျိန်းသေအားလုံးမူးယစ်ဆေးကောင်းစွာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေဖို့ရန်သင့်အားအကြံပေးများနှင့်အရက်မူးလာပြီ!
Nofap အလုပ်လုပ်တယ်၊ ငါ့ HOCD ကိုခွဲထုတ်လိုက်ပြီ! ယခုတွင်ငါသည်အမြိုးသမီးမြားလှပသောရှာပါ! သေချာတာပေါ့ငါနေဆဲဒီနေရာမှာအဲဒီမှာ spikes ရှိသည်ပေမယ့်အချိန်ပိုကသူ့ဟာသူထွက်ခွဲထား! သင်တို့ရှိသမျှသည်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ကြောင်းအပြုသဘော peep နေပါ။
ငါ 19 နှစ်ရှိပြီပြောင်းလဲ 20 လာမည့်လတွင်ဖြစ်၏။
LINK - HOCD nofap ဆင်းရဲခံရသောလူအဘို့ဤရှုပ်ထွေးထဲကလမ်းပါ!